တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီး H.E. Mrs. Sigrid Kaag အားလက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၈ မေ ၃၀၊ ၂၀၂၀
ေနျပည္ေတာ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၈
ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ မွအစုိးရအဆက္ဆက္ ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ယခုအခါတြင္ျပည္သူမ်ား မွ ေရြးခ်ယ္သည့္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚေလွ်ာက္လွမ္းေနခ်ိန္၌ တပ္မေတာ္မွခုိင္ခိုင္မာမာရပ္တည ေဆာင္ရြက္ ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္အတြက္ အစုိးရႏွင့္တပ္မေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားမွန္ကန္မႈရွိရန္ လုိအပ္မႈႏွင့္ ယူဆခ်က္မ်ားဘက္လုိက္မႈမရွိရန္ လုိအပ္မႈအေျခအေနမ်ား၊ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ခြာသြားသည့္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္ အညီစိစစ္လက္ခံႏုိင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာ တူညီခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရးဒုတိယ၀န္ႀကီးေဟာင္း H.E. Ambassador Mrs. Rosario Manalo ဦးေဆာင္သည့္ လြတ္လပ္ေသာစုံစမ္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မွလုိအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိေရး တပ္မေတာ္မွအျပည့္အ၀ပူးေပါင္း ကူညီေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အေျခ အေနမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ေတြ႕ဆုံပြဲအၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က နယ္သာလန္ႏုိင္ငံ၊ ႏုိင္ငံျခားကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးအား အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးအပ္ၿပီး တက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ားႏွင့္အတူ စုေပါင္းဓာတ္ပုံ႐ုိက္ခဲ့ၾကသည္။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် လွတ်လပ်ရေးရပြီးချိန်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏နိုင်ငံရေးပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများတွင် တပ်မတော် မှအစိုးရအဆက်ဆက် ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရမှု အခြေအနေများနှင့် ယခုအခါတွင်ပြည်သူများ မှ ရွေးချယ်သည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ်လျှောက်လှမ်းနေချိန်၌ တပ်မတော်မှခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည ဆောင်ရွက် နေမှုအခြေအနေများ၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်အတွက် အစိုးရနှင့်တပ်မတော်မှ ဆောင်ရွက် နေမှုအခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းအချက် အလက်များမှန်ကန်မှုရှိရန် လိုအပ်မှုနှင့် ယူဆချက်များဘက်လိုက်မှုမရှိရန် လိုအပ်မှုအခြေအနေများ၊ တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာသွားသည့် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများအား ဥပဒေနှင့် အညီစိစစ်လက်ခံနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံသဘော တူညီချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများ၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဒုတိယဝန်ကြီးဟောင်း H.E. Ambassador Mrs. Rosario Manalo ဦးဆောင်သည့် လွတ်လပ်သောစုံစမ်း စစ်ဆေးရေးကော်မရှင်မှလိုအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များရရှိရေး တပ်မတော်မှအပြည့်အဝပူးပေါင်း ကူညီဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေ အနေများအား ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးအား အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးအပ်ပြီး တက်ရောက် လာကြသူများနှင့်အတူ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။